SARUDZA MUTAURO Albanian Arabic Armenian Bulgarian Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French German Greek Greenlandic Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Sepedi Serbian Shona Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Zulu
KUNYENGETERA kune zvakunotibatsira here? Bhaibheri rinoratidza kuti minyengetero yevashumiri vakatendeka vaMwari inovabatsira chaizvo. (Ruka 22:40; Jakobho 5:13) Ichokwadi kuti kunyengetera kunogona kutibatsira chaizvo panyaya dzokunamata, mafungiro edu, kunyange utano hwedu chaihwo. Kungatibatsira sei?
Ngatitii une mwana apiwa chipo. Unomudzidzisa here kuti zvakakwana kungotenda nechomumwoyo? Kana kuti unomudzidzisa kuti anyatsoratidza kuti anotenda? Patinotaura zviri pamwoyo pedu, zvinoita kuti tinyatsofunga nezvemashoko acho tonyatsotaura zvine musoro. Izvi ndizvo zvinoitika here patinotaura naMwari? Ndizvo chaizvo! Ngatimbokurukurai mienzaniso inotevera.
Minyengetero yokuonga. Kana tikatenda Baba vedu nokuda kwezvakanaka zvatinowana, tinoramba tichifunga nezvezvikomborero zvedu. Tinobva tanzwa tichida kuramba tichitenda, tichifara, uye tiine mafungiro akanaka.—VaFiripi 4:6.
Muenzaniso: Jesu akaratidza kuonga nzira iyo Baba vake vakanzwa uye vakateerera nayo minyengetero yake.—Johani 11:41.
Minyengetero yokukanganwirwa. Kana tikakumbira kukanganwirwa naMwari, tinosimbisa hana yedu, tinopfidza zvechokwadi uye zvinotibatsira kunyatsoziva kuti chivi hachisi chinhu chokutamba nacho. Tinobva tanzwa tisingacharemerwi nokutadza kwatinenge taita.
Muenzaniso: Dhavhidhi akanyengetera achiratidza kupfidza uye kusuruvara.—Pisarema 51.
Kunyengeterera kutungamirirwa uye kupiwa uchenjeri. Kukumbira Jehovha kuti atitungamirire kana kuti atipe uchenjeri hwatinoda kuti tiite zvisarudzo zvakanaka kunotibatsira kuti tive vanhu vanonyatsozvininipisa. Kunotiyeuchidza kuti tizive kuti pane zvatisingagoni kuita uye kunoita kuti tivimbe naBaba vedu vokudenga.—Zvirevo 3:5, 6.
Muenzaniso: Soromoni akazvininipisa akakumbira kutungamirirwa uye uchenjeri kuti atonge Israeri.—1 Madzimambo 3:5-12.
Minyengetero yevakaora mwoyo. Kana tikadurura mwoyo yedu kuna Mwari patinenge takavhiringidzika mupfungwa, tinonzwa tazorodzwa mumwoyo medu uye tinoratidza kuvimba naJehovha pane kuzvivimba.—Pisarema 62:8.
Muenzaniso: Mambo Asa akanyengetera paakanga atarisana nemuvengi wake aityisa.—2 Makoronike 14:11.
Minyengetero yokuti vamwe vanenge vachinetseka vagare zvakanaka. Minyengetero yakadaro inotibatsira kusangoita zvakatinakira isu chete, asi kuti tiwedzere kuva netsitsi uye kuonawo kutambura kwevamwe sokunge kuti ndekwedu.
Muenzaniso: Jesu akanyengeterera vateveri vake.—Johani 17:9-17.
Minyengetero yokurumbidza. Patinorumbidza Jehovha pamusana pemabasa ake anoshamisa uye unhu hwake hwakanaka, kumuremekedza kwatinoita uye kumuonga kuchawedzera. Minyengetero yakadaro ichatibatsirawo kuti tiswedere pedyo naMwari wedu uye Baba vedu.
Muenzaniso: Dhavhidhi akarumbidza Mwari nomwoyo wose pamusana pezvaakasika.—Pisarema 8.
Chimwe chikomborero chinobva pakunyengetera “rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose.” (VaFiripi 4:7) Zvechokwadi chikomborero chaicho kugadzikana mupfungwa munyika ino yakaita manyama amire nerongo. Runotibatsirawo kuva neutano hwakanaka. (Zvirevo 14:30) Asi runowanikwa nekungwara kwedu here? Kana kuti pane zvimwe zvinokosha zvatinofanira kuita?
Munyengetero unoita kuti ugadzikane mupfungwa, uve noutano hwakanaka, uye chinotokosha unoita kuti usimbe pakunamata
Munyengetero—Mwari Achanzwa Uye Achapindura Here?
Bhaibheri rinoratidza kuti mazuva ano Jehovha anoteerera minyengetero. Zvatinoita ndizvo zvinoita kuti ateerere minyengetero yedu kana kuti asaiteerera.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI October 2010